Raw L-Carnitine powder (541-15-1) Vaiti - Phcoker Chemical
SKU: 541-15-1 Category: Kuonda
Raw L-Carnitine powder (541-15-1) video
Raw L-Carnitine powder (541-15-1) Tsanangudzo
Product Name Raw L-Carnitine powder
Kemikari Name CAR-HYDROXY-GAMMA- (TRIMETHYLAMMONIO) BUTYRATE; (R); CAR-OH; -3-HYDROXY-3- (TRIMETHYLAMMONIO) BUTYRATE; VITAMIN B-GAMMA
muchiso Name Carnitor, Carnicare
Kirasi yeMishonga Nutraceutical products
Molecular Wsere 161.2
Kunyorera Point 197-212 ° C (lit.)
Dhikirai: 287.5 ° C (yakawandisa kuongororwa)
Biological Half-Life 2 ~ 15 maawa
Skukodzera H2O: 0.1 g / mL pa 20 ° C, yakajeka, isina muto
Raw L-Carnitine powder APane 1) Zvokudya zvemucheche: Zvinogona kuwedzerwa mukaka wehuni kuti uwedzere kudya.
2) Kurasikirwa kwehuremu: Raw L-Carnitine powder inogona kupisa adipose yakawanda mumuviri wedu, zvino inotumira kune simba, iyo inogona kutibatsira kuti tive nemafuta.
3) Vakatambi vezvokudya: Zvakanaka kuvandudza simba rinoputika uye kurwisa kuneta, izvo zvinogona kuwedzera kukwanisa kwedu kwemitambo.
4) Kuwedzerwa kwezvokudya zvakakosha mumuviri wemunhu: Nekukura kwezera redu, zviri muRaw L-Carnitine powder mumitumbi yedu iri kuderera, saka tinofanira kuwedzera Raw L-Carnitine powder kuchengetedza hutano hwemuviri wedu.
Raw L-Carnitine powder (541-15-1) tsananguro
Raw L-Carnitine powder ishu hunowanikwa kubva kumamino acids lysine uye methionine. Zita rayo rinotorwa kubva pakuti yakatanga kusarudzwa nenyama (carnus) .Raw L-Carnitine powder powder inobatanidzwa mune simba re metabbolism uye kuchengetedzwa kwemitochondrial. Raw L-Carnitine powder haifaniri kufunga kuti kudya kunokosha nokuti inogadzirwa mumuviri, asi inogona kudyiwa kuburikidza nekudya. Mumuviri unobereka carnitine muropa uye impso uye unoichengeta mumatumbo emasaga, mwoyo, uropi, uye mamwe matukisi. Kuwedzera kwe Raw L-Carnitine powder powderdoes kwete kupisa mafuta kunze kwekuti munhu asina kukwana muRaw L-Carnitine powder powder anobatsira muviri kubudisa simba. Zvakakosha kuti mwoyo uye uropi zvirambe zvichishanda, musimba kufamba, uye dzimwe dzakawanda zvirongwa zvemuviri. Asi kuburitsa kwayo hakugoni kusangana nezvinodiwa mune zvimwe zviitiko zvakadai sekuwedzerwa kwezvinoda simba uye naizvozvo inonzi inoditionally nutriging necessity. Kune miviri miviri (isomeri) ye carnitine, viz. Raw L-Carnitine powder uye D-carnitine, uye chete chi-L-chimeri chinonzi biologically chinoshanda.
L-Carnitine powder (541-15-1) Mechanism of Action
L-carnitine powder haikwanisi kuita muprotene biosynthesis, asi inokurudzira ketone kushandiswa kwemuviri uye chizvarwa che nitrojeni kusvika pamwero. Basa rayo guru nderokusimudzira mafuta e-acid beta oxidation, inowanikwa muchiropa uye mitochondria yemamwe masero ematendi. Inonyatsozivikanwa kuti mafuta asina mafuta uye acyl coenzyme A haagoni kupinda mukati memitochondrial membrane, asi acylcarnitine anogona kuita kudaro nokukurumidza. Nokudaro, zvakatemwa kuti L-carnitine powder ndiye mutakuri anotakura mafuta asidi uye acyl mafomu mu membrane ye memito. Nzira dzekutakura iyi dzisati dzisingazivikanwi, asi ndeyechokwadi kuti carnitine acyl-CoA transferase ndiyo enzyme inokosha mune izvi. Iine maviri isoenzymes, imwe yeyo carnitine acyl-CoA transferase I, yakagadzirirwa kune imwe kunze kwemu membrane. Apo fatty acid inokonzerwa ne acyl-CoA-synthatase kubudisa acyl-CoA, inotakuriswa ne carnitine acyl-CoA transferase I mu membrane. Mushure mekunge wapinda mu membrane, inogadziriswa nechipiri isoenzyme - carnitine acyl-CoA transferase II - yakazoshandurwa kuva chimiro cheAcyl-CoA chinogona kushandiswa zvakananga nemafuta emasikisi enermic acid. Mushure mezvo, inobudisa simba kuburikidza nemitemo yakadai se dehydrogenation uye deoxygenation.
L-carnitine powder inogonawo kugadzirisa acyl ratio mu mitochondria, saka inokonzera simba metabolism. L-carnitine inogona kubatanidzwa mukutakura kwe branched chain amino acid metabolites, iyo inokurudzira nguva dzose metabolism ye branched chain amino acid.
Kushandiswa kweL-Carnitine powder (541-15-1)
Zvokudya zvemucheche: Zvinogona kuwedzerwa mukaka wehupfu kuti uwedzere kudya.
Kurasikirwa kwemahombekombe: Raw L-Carnitine powder inogona kupisa adipose yakawanda mumuviri wedu, ndokuzoendesa kune simba, izvo zvingatibatsira kuti tive nekunyanyisa.
Vatambi vezvokudya: Zvakanaka kuvandudza simba rinoputika uye kurwisa kuneta, izvo zvinogona kuwedzera kukwanisa kwedu kwemitambo.
Kukosha kwekudya kunovaka muviri wemunhu: Nekukura kwezera redu, zviri muRaw L-Carnitine powder mumitumbi yedu iri kuderera, saka tinofanira kuwedzera Raw L-Carnitine powder kuchengeta hutano hwemuviri wedu.
Yakurudzirwa L-Carnitine powder (541-15-1) Dosage
Nhamba yakakwana yeL-carnitine powder ndeye 500-2,000 mg pazuva.
Kunyange zvazvo kuyerwa kuchienzaniswa kubva pakudzidza kuverenga, heino mhedziso yekushandiswa uye dose yefomu rimwe nerimwe:
Acetyl-L-carnitine: Iyi fomu ndiyo yakanaka yehutano hwehuropi uye basa. Maitiro akasiyana kubva ku600-2,500 mg pazuva.
L-carnitine L-tartrate: Iyi fomu inonyanya kushanda pakuita basa. Maitiro akasiyana kubva ku1,000-4,000 mg pazuva.
Propionyl-L-carnitine: Iyi fomu ndiyo yakanakisisa yekuvandudza kuteura ropa kune avo vane ropa rekuwedzera kwepamusoro kana mamiriro ehutano akafanana. Maitiro akasiyana kubva ku400-1,000 mg pazuva.
Kusvikira ku 2,000 mg (2 gramu) pazuva rinoratidzika rakachengeteka uye rinobudirira munguva refu.
Kubatsira kweL-Carnitine powder (541-15-1)
♦ Heart Health: Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti zvingaita kuti kuderedza kushanda kweropa uye kuvhiringidza kunobatanidza nechirwere chemwoyo.
♦ Itai Maitiro Okugadzirisa: L-carnitine zvinobatsira zvisingatauri uye kutora mavhiki kana mwedzi kuti aoneke. Izvi zvinokonzerwa nemishonga yakafanana ne caffeine kana kuti creatine, iyo inogona kunyatsosimbisa mitambo yekuita. Semuenzaniso: kushandisa muviri kupora, musimba mhepo yakagadziriswa, simba rekusimudzira, kusununguka kwemaviri musuru, kubudisa masero eropa.
♦ Tora 2 Diabetes: Chimwe chekudzidza nezvevanhu vane chirwere cheshuga chechirwere cheshuga chinotapukisa chirwere cheshuga chakaratidza kuti carnitine inowedzera zvakanyanya kuderedza shuga yeropa, zvichienzaniswa ne placebo.
♦ Migumisiro yeBurin Function: Mukuongorora kwezuva re90, vanhu vane doro rinodhakwa vakatora 2 gramu yeAcetyl-L-carnitine zuva rimwe nerimwe vakave nekuvandudzika kwezvinhu zvose zvehuropi zvinoshanda.
♦ Kuonda: Chimwe chekuongorora zvidzidzo zvipfumbamwe, kunyanya muvanhu vakaoma kana vanhu vakuru, vakawana kuti vanhu vakarasikirwa nehuwandu hwemamiriyoni e2.9 (1.3 kg) kuwedzera kukura pavanotora L-carnitine powder. Zvisinei, kunyange zvazvo masero emagetsi eL-carnitine powder anoratidza kuti inogona kubatsira kurasikirwa kwemazivi, asi zvingangoita zvishoma kuderedza kuora.